Newsenepal:: बिवाह पछि किन बढ्छ महिलाको हिप?
बिवाह पछि किन बढ्छ महिलाको हिप?
२३ माघ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ ।
साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । एक सर्वेले के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ त ? यो बारेमा पत्ता लगाएको छ ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठुलो थियो ।यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
164402/6/2019 @ 14:01